Ihe Ị Ga-eme na Munich | Otu Di na Nwunye
Ikpebi ihe ị ga-eme na Munich bụ ihe dị ukwuu banyere akụkọ ihe mere eme ka ọ na-efu efu. Munich bụ obodo siri ike nke mmadụ nwere ike ikwu na, n'eziokwu, ọ bụ nke ya. Akụkọ ihe mere eme, onye nke ọ bụla dị mma, ihe ọjọọ, ma ọ bụ na-atụ egwu na-atụ egwu, dị iche iche. Ebe mgbasa nke mba na-akpata na Nazi Germany na Hitler, Munich na-eto site n'oge aghụghọ ya ma taa bụ ihe dị jụụ, ọnọdụ udo na nke na-adịghị mma. Site na Bavarian ije na ihu-sized pints nke Weissbier na nghọta ya na uto ya site n'akụkọ ihe mere eme nke agha, Munich bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha site na onye ọ bụla ọzọ, ọ na-adọrọ mmasị ka anyị na-atụghachi azụ, na-achọta ihe anyị ga-eme na Munich.
Site na Ludmiła Pilecka, site na Patrol110 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 /) ma ọ bụ CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], site na Wikimedia Commons
Ihe ole na ole maara ma ghọta banyere Munich bụ na ọ bụkwa nnukwu njem njem mmefu ego, na otu nke ị ga-ahụ onwe gị mgbe ọ bụla na-enweghị isi site na ịmalite ime ihe site na iguzo, na-eje ije ma ọ bụ na-ele anya. N'ebe a, anyị ekpuchiwo ihe ukwu ise dị na Munich, iji mee ka ọtụtụ isi obodo ochie Bavarian.
Njem Njegharị Na-agagharị
Otu n'ime ahụmahụ na-atọ ụtọ na nke na-akwụghachi ụgwọ na Munich bụ Njem Njegharị Na-ejegharị Na-aga, nke ọnụ ọgụgụ nke ndị nọnyeere onwe ha na-arụ ọrụ site n'enye onyinye n'ozuzu obodo. N'ihe dị iche n'ihu Marienplatz, isi obodo ebe 1158 nọ, ị ga-enwe ohere ịgagharị Munich site na ụkwụ ma mụọ banyere akụkọ miri emi na nke bara ọgaranya nke obodo ahụ.
Onye anyị họọrọ bụ Sandeman's, nke zukọtara na etiti obodo n'ihu Marienplatz. Ọ kachasị mma ileba anya maka ohere na ohere, karịsịa ihu igwe na-echere, mana ịmepụta nke ọma iji gaa njem dị mfe. Ndị nduzi nlegharị anya bụ ihe ọmụma gbasara Munich, ha ga - eso gị kọwaa nkọwa dị iche iche n'azụ ebe ndị dị ka Marienplatz (na Glockenspiel na-achọ ụlọ elu ya), Englischer Garter, Munich Residenz, Altes Rathaus na ise a ma ama Munchen ụlọ ahịa gụnyere ubiquitous Hofbrauhaus, nke na-abịa na 1589! Ebe ndị ọzọ na-agụnye Odeonsplatz, saịtị nke ọtụtụ okwu ndị Nazi n'oge na n'akụkụ ebe a na-ebo Hitler agha n'oge Beer Hall Putsch na 1923. N'ezie, Munich na-abịa na njem a nke na-ebute akụkọ niile - ma mara ma amaghi obodo ahụ.
Jide n'aka inwe igwefoto aka, ka njem njem na-enye ọtụtụ n'ime ihe ị tụrụ anya ka ị hụ na Munich, ihe ịtụnanya ole na ole, na ọtụtụ ịma mma mara mma na obodo a mara mma. Njegharị na-agagharị n'efu ga-ahụ, ọ bụrụgodị na ị na-achọ ihe iji jupụta otu ụbọchị na Munich.
N'ime oge ụfọdụ nke afọ, ịnwere ike ịga njem n'etiti ndị Ahịa Krismas nke Munich, otu n'ime ahịa ahịa Krismas kacha mma na Germany, yana ụfọdụ ndị ọzọ, obere ahịa ahịa Krismas na obodo.
Ubi na Nymphenburg Park
Obubọk Nymphenburg bụ ebe mara mma a na-apụghị ịkọwa akọwacha, kwusiri na 1675 na ozugbo ọ na-abanye n'ụlọ dịka Eze Ludwig II, bụ onye a mụrụ na 1845. Ọ bụ ezie na nnukwu ụlọ ahụ dị mma, ubi ndị dị n'èzí dị mma free na-agagharị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị atọ ụtọ na Munich, n'enweghị ajụjụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogige 500, ogige ndị dị na Nymphenburg dị n'akụkụ isi iyi dị iche iche dịka The Grand Cascade, a na-ahụchasị ogige ndị mara mma na ọdọ mmiri mara mma nke a pụrụ ile anya kwa afọ. Ihe mgbakwasị ahụ na-ejigide ọtụtụ Bavarian ochie ahụ, ebe ọ bụ na ha anọgideghị na-agbanweghị agbanwe karịa obere ihe mgbakwunye na mgbanwe ndị emere na 19 ikpeazụth narị afọ. E nwere ọtụtụ ebe nkiri na mgbakwasị, gụnyere Royal Bathing House mara dịka Badenburg na Pagodenburg, ụlọ tii eze nke e wuru na mara mma 19th nke narị afọ.
Ọ bụ ezie na a na-akwụ ụgwọ ego maka ịbanye Nymphenburg ọtụtụ afọ, apụ-oge nke afọ ebe enwere ike ịbanye na ntinye - ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ ga -
Dụgharịa Englischer Garten
Site na foto nke LuxTonnerre [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], site na Wikimedia Commons
Ebe a na-ewu ewu na njem njegharị, Englischer Garten na-eju otu n'ime ya anya size - nke buru ibu karie Hyde Park na London na New York's Central Park.
Glisen glisen nwere mgbagwoju anya, ebe ọ bụ ihe omimi na iche iche - gụnyere ụlọ teknụzụ Japan nyere City nke Munich site Japan n'oge 1972 Summer Olympics na ndị a ma ama Eisbach, ebili mmiri nke na-emepụta na iyi ma na-eje ozi dị ka ebe mara mma maka ndị na-achọgharị ụgbọ mmiri na-achọ ogologo mmiri.
Ọtụtụ ndị, Englischer Garten bụ ebe magburu onwe ya iji zuru ike. A na-ahụ ndị na-ekpochapu ọkụ na anyanwụ n'oge ọnwa okpomọkụ, ma ọ bụ na-ezu ike n'elu bench iji gụọ akwụkwọ ma ọ bụ na-agbada na blanketị ma eleghị anya ole na ole sandwiches dị n'aka. Ọ bụ nke a na-eme ka ogige bụrụ ezigbo ebe ị ga-anọ, gbanwee mkpụrụ obi ma hụ na obodo ahụ gafere gị.
Ihe a kpọtụrụ aha Hofbrauhaus bụ ebe dị mkpa na akụkọ ihe mere eme nke Munich, dị ka saịtị nke ebe a na-ewu ewu na obodo kachasị ama kemgbe 1589, na ihe ị ga-ahụ na Munich.
N'ịbụ nke e weghachitere ike mgbe ọ na-akwado ọtụtụ bombu n'oge agha nke Agha Ụwa nke Abụọ, Hofbrauhaus na-ejigide ihe ndekọ mbụ ya gụnyere ụlọ nkwakọba ihe, nke a na-ese nke ọma na ezigbo Bavarian music na-ebi ndụ n'akụkụ nnukwu ugwu nke obi ike mmiri. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị mkpa ka ị nweta ihe dị mma iji nwee obi ụtọ na Hofbrauhaus, dịka ụlọ nzukọ ya na ihe oriri na-eri ihe n'elu ime ụlọ nile-aghaghị ịhụ ebe nkiri na-enweghị ohere ma na-emeghere ndị njem nleta kwa afọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta Euro ole na ole na saịtị, Hofbrauhaus bụ ebe dị mkpa iji nweta otu n'ime ndị beers ndị ahụ buru ibu na enyemaka mbụ gị nke schnitzel! Mụ na Tracy nọdụrụ ọtụtụ awa, na-anọdụ n'oche ụlọ mara mma, na-ege ntị na egwu egwu polka nke dị na ụlọ Hofbrauhaus dị ala, ọrụ nkà dị oke egwu nke na-enwetakwa ọmarịcha mma maka arụmọrụ dị otú ahụ.
Site na Dave Morris sitere na Edinburgh, UK (Olympic park 21) [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], site na Wikimedia Commons
Olympiapark, nke e wuru maka 1972 Munich Summer Olympics, ka na-arụ ọrụ, mara mma, ma meghere ọha. N'ime oge okpomọkụ, Olympiapark na-eje ozi n'obodo ahụ na ọtụtụ usoro nkiri n'efu na ebe mara mma. Ogige egwuregwu ahụ ka na-akwado ọtụtụ ihe omume kwa afọ, dịka ezumike na ice na isii-ọsọ-ọsọ, nke abụọ a na-agakarị ma na-echekwa maka ndị njem nleta.
N'èzí ámá egwuregwu ahụ bụ Olympiaberg, ọmarịcha mma mara mma na nnukwu ugwu nke na-elekọta ndị na-egwu ihe nkiri na ndị na-egwu egwu nke na-achọ ịchọrọ egwu Olympiaparks na-eme ihe nkiri dị iche iche - ma na-enweghị ego. Ebe nkiri ndị a dị ebe Munich malitere, ma ọ bụghị ebe ọ ga-akwụsị. N'ịbụ nke jupụtara n'ihe omimi, ịma mma na akụkọ ihe mere eme, ọ bụ obodo nke na-enye ohere ndị a na-enweghị ohere ịchọta miri emi - ọtụtụ ihe dị na Munich.
Na-achọ ebe ị ga-anọ mgbe ị nọ na Munich? Ị nwere ike izute nnukwu mmadụ, na ndị njem na-eche echiche, na otu n'ime ọtụtụ nnukwu ụlọ mbikọ dị na Munich. Ha na-emefu ego na-echefu ego, na nnukwu nhọrọ maka a ebe iji nọrọ na obi Munich!
Category: Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ebe nkiri ebe nkiri, Germany, History, Nhazi njem Tags: biya, biya, Deutschland, na-enwusi, free, Jémanị, akụkọ ihe mere eme, hofbrauhaus, marienplatz, mara, munich, njegharị, weissbier
← Uru nke njem: Njem dịka Ngwá Ọrụ Nwepụta Onwe Onye
Nyochaa: Amsterdam's A Train Hotel →
4 Comments na "Ihe ị ga-eme na Munich"
Chaị! Nke a mara mma! N'ihe banyere Munich. Aga m enwe mmasị ileta Munich otu ụbọchị, ma ihe mgbochi asụsụ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa nye m, ka ha na-asụ Bekee? M ga-enwe ekele maka ozi ọ bụla bara uru banyere asụsụ ukara ha.
N'ezie, ee. Ọ dị mma n'ihi na mụ na Tracy na-asụ German (ya karịa m), ma ọtụtụ oge anyị ga-amalite ikwu okwu n'asụsụ German, ha na-azaghachi na Bekee. N'eziokwu, echeghị m na anyị na-agba ọsọ na onye ọ bụla nke na-enweghị ike ịkwurịta okwu n'asụsụ Bekee.
Ogige Olimpik bụ doro anya na ebe ọ bụla onye ọ bụla na-asọda na ala Munich. Mma ya ka na-eguzo ọbụna mgbe ọtụtụ afọ gasịrị. Ihe ndị na-eme n'oge okpomọkụ na-eme n'oge na-adịghị anya ga-emetụ gị n'uche. M hụrụ mma mara mma nke Munich dị ka ọ dị mgbe ọ bụla.
Kwere - ọ bụ obodo dị n'okpuru, anyị kwenyere 🙂